मेक्सिकोबाट युरोप यात्रा - के तपाईंलाई नयाँ आवश्यकताहरू थाहा छ? | यात्रा समाचार
मेक्सिकोबाट युरोप यात्रा गर्न आवश्यकताहरू
के तपाइँ मेक्सिकोमा बस्नुहुन्छ र तपाइँको सपना यसको अनौंठो रीतिथिति र ठाउँहरूको मजा लिन युरोप यात्रा गर्नु हो? यदि उत्तर हो हो भने तपाई उत्तम ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईंलाई आधारभूत आवश्यकताहरू बताउन जाँदैछौं ताकि तपाईं सक्नुहुनेछ मेक्सिको देखि युरोप को लागी यात्रा पूर्ण सुरक्षा र विश्वास संग।
धेरै अवसरहरूमा जब यस्तो यात्रा आउँदछ, हामी सँधै के थाहा गर्दैनौं कागजातहरू जुन तपाईं अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई यी लाइनहरूको पछाडि पत्ता लगाए पछि, तपाईंले आराम गर्नुपर्नेछ र राम्रो हकदार छुट्टिहरूको आनन्द लिनुपर्नेछ, किनकि तिनीहरू सधैं यस्तै आकर्षक हुँदैनन्।
1 के भिसा भनेको मेक्सिकोबाट युरोप सम्म यात्रा गर्नु आवश्यक छ?
2 राहदानी, सँधै मान्य
3 ETIAS फारम
4 राउन्ड-ट्रिप टिकटहरू
5 स्वास्थ्य बीमा, सधैं एक राम्रो विकल्प
6 प्रति दिन आरक्षण
के भिसा भनेको मेक्सिकोबाट युरोप सम्म यात्रा गर्नु आवश्यक छ?
कुनै श doubt्का बिना, यो सधैं सबै भन्दा धेरै स्पष्ट प्रश्नहरू मध्ये एक हो। सत्य यो हो कि यदि तपाइँ जाँदै हुनुहुन्छ तीन महिना भन्दा कम हुन युरोप वा कथित शेंजेन क्षेत्र भ्रमण गर्दै, त्यसपछि तपाईंलाई भिसा चाहिने छैन। त्यसोभए यदि तपाइँको छुट्टी केवल दुई हप्ता वा बढिमा छ भने, तपाइँ चिन्ता लिनु हुँदैन किनभने तपाईले यो कागजात अनुरोध गर्नुपर्दैन, किनकि यो बुझिन्छ कि तपाइँ केवल त्यस माध्यमबाट जानु हुँदैछ।
राहदानी, सँधै मान्य
तपाईंले भर्खर त्यो याद गर्नुपर्दछ राहदानी सधैं मान्य हुनुपर्दछ। तर यो तथ्य हामी यात्रा गर्ने गन्तव्यको परवाह बिना नै देखा पर्दछ। यस अवस्थामा यो युरोपको बारेमा हो र हामीले सबै चीजहरू अप टु डेट राख्नु पर्छ ताकि कुनै समस्याहरू नपरोस। यसको वैधता तीन महिना भन्दा बढी सामिल हुनुपर्दछ।
केवल तीन बर्ष भन्दा बढीको लागि, मेक्सिकोबाट युरोप यात्रा गर्न नयाँ प्रक्रिया स्थापना गरियो। २०२१ साल सम्ममा, सबै मेक्सिकनहरूले यो फारम वा अनुमति भर्नु पर्छ। यो एक प्रकारको प्राधिकरण भन्न सकिन्छ तपाईको यात्रामा ठूलो समस्या बिना मजा लिन सक्षम हुन। तपाईले यो फारम भर्न सक्नुहुन्छ ETIAS अनलाइन र यो तीन बर्षको लागि मान्य छ।
यसमा तपाईंले आफ्नो नाम, यात्रा विवरणहरू, साथै राहदानी जानकारी, आदि प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ सधैं छ ETIAS फाराम पूरा गर्नका लागि गाईड गर्नुहोस् यसले तपाईंलाई आवश्यक परेकोमा मद्दत गर्दछ। केही मिनेटमा र सात यूरोको अनुमानित भुक्तानी पछि (१ Mexican० मेक्सिकन पेसोस) तपाईंसँग यो तयार हुनेछ। यो अनुरोध पछि, तपाईसँग दुई वा तीन दिन पछि तपाईको इ-मेल ठेगानामा जवाफ हुनेछ। यी सबैको उद्देश्य छ युरोपमा सुरक्षा सुदृढ गर्न सक्षम हुनुहोस्.
तपाईंले विमान टिकट धेरै राम्रोसँग राख्नु पर्छ। किनकि यो पहिलेको जस्तो लाग्दैन, तिनीहरूलाई कुनै पनि समयमा आवश्यक पर्दछ। यसले तपाइँसँग वास्तवमै एक छ भनेर देखाउँदछ बिभिन्न देशहरूमा प्रवेश मिति, तर आउटपुट पनि। यस कारणका लागि, हामीले तिनीहरूलाई सँधै आफैंमा लैजानुपर्छ, राम्रोसँग भण्डार गरिएको छ, तर धेरै छैन किनभने हामी त्यस सूटकेस वा ब्याकप्याकको जेबमासमेत बिर्सन सक्छौं।
स्वास्थ्य बीमा, सधैं एक राम्रो विकल्प
अर्को शब्दमा, यो युरोपियन देशहरूमा प्रवेश गर्न बाध्यकारी छैन, तर यो आवश्यक छ। किनकि जब हामी घरबाट धेरै दिनसम्म हुन्छौं र के हुन सक्छ भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन। प्रत्येक चोटि जब हामी अन्य देशहरूमा यात्रा गर्दछौं, यसले चोट पुर्‍याउँदैन केही बीमा लिनुहोस् विशेष गरी स्वास्थ्य र आपतकालिनको मामिलामा हामीले आवश्यक चीजहरूलाई कभर गरेका छौं। यदि हामी बच्चाहरू संग जान्छौं, तब यो आवश्यक भन्दा बढी हुन्छ, किनकि हामीलाई थाँहा छ कि उनीहरू बिरामी पर्न सक्छन् हाम्रो चाहना भन्दा बढी।
प्रति दिन आरक्षण
यो सँधै हुँदैन, तर माइग्रेसनको साथ सबै सम्भव हुन्छ। कहिलेकाँही, तीनिहरूले हामीलाई मार्क गरेको यात्रा कार्यक्रमको लागि पनि सोध्न सक्छन्। अवश्य पनि, यात्रुलाई जहिले पनि ऊ कुन ठाउँमा सर्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा हुँदैन, हो होटेल रिजर्भेसन वा टुरहरू लिनले धेरै मद्दत गर्दछ। जस्तो कि हामी भन्छौं, यो कुनै अनिवार्य कुरा होईन, तर शान्त रहन, के बोक्ने जस्तो केही छैन अनलाइन आरक्षण जुन हामीले अनुरोध गरेका छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » मेक्सिकोबाट युरोप यात्रा गर्न आवश्यकताहरू